अचार उद्योगले बदलेको हजुरीको परिचय : सासू बनाउने, ज्वाइँ बेच्ने ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(August 13, 2020)
अचार उद्योगले बदलेको हजुरीको परिचय : सासू बनाउने, ज्वाइँ बेच्ने !
मंसिर १३, २०७६ शुक्रबार १२:२३:५२ | जानुका दुवाडी
काठमाण्डौ – अचारले खानाको स्वाद फेर्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ । तर काठमाण्डौकी ६५ वर्षीया हजुरी विष्टको भने अचारले जीवन र परिचय नै फेरिदिएको छ ।
२५ वर्ष अघिसम्म एउटा सामान्य गृहिणीको रुपमा रहेकी हजुरी अहिले एउटा सफल अचार उद्यमीको रुपमा चिनिनुहुन्छ । २०५१ सालमा एउटा संस्थाले दिएको अचार बनाउने तालिमपछि उहाँले व्यावसायिक रुपमा अचार बनाउने काम थाल्नुभएको हो । त्यही कामले अहिले नामसँगै दाम मिलेको छ ।
ललितपुरको सानेपामा रहेको उहाँको उद्योगबाट वर्षको ३५ हजारदेखि ४० हजार बट्टासम्म अचार उत्पादन हुन्छ । एक बट्टा अचारको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । उद्योगबाट प्रत्यक्ष २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उहाँको ज्वाइँ क्रतुराज पाण्डेलेसमेत अचार बिक्री गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ ।
सासूको अचार उद्योगपछि ज्वाइँको अचार घर
डिल्लीबजार घर भएका पाण्डे बेलाबेला ससुराली पुग्नुहुन्थ्यो । ससुरालीमा सासूआमाले बनाएको अचार चाख्न पाइन्थ्यो नै । बाहिर पनि उहाँले सासूआमाले बनाएको अचारको गुणगान सुन्नुभयो ।
त्यसपछि उहाँलाई अचार व्यवसाय गर्ने सोच आयो । ‘मलाई सासूआमाको अचार उद्योगले नै नयाँ सोचको विकास गरायो’ पाण्डेले भन्नुभयो ।
पाण्डेले तीन वर्षअघि ललितपुरको झम्सिखेलमा अचार घर नामक रेष्टुरेन्ट सुरु गर्नुभयो । यसअघि उहाँ बैंकमा काम गर्नुहुन्थ्यो । ‘बैंकमा आम्दानी पनि ठिकै थियो’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तर मनमा सन्तुष्टि भने थिएन, त्यसैले नयाँ व्यवसाय गर्ने योजना बनाएँ र सुरु गरेँ ।’
होटल म्यानेजमेन्ट पढेका पाण्डेलाई पहिलेदेखि नै यही क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा थियो । तर कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने मेसोमेलो पाउनुभएको थिएन ।
अलमल भैरहँदा उहाँले सासूआमाले बनाएको अचारको बजार बुझ्नुभयो । अचार बेच्न कठिनाई भैरहेको थाहा पाएपछि उहाँले रेष्टुरेन्ट खोल्ने निधो गर्नुभयो । सासुको अद्योगमा उत्पादित अचारलाई मुख्य आकर्षण बनाएर रेस्टुरेन्टको नाम ‘अचार घर’ राख्नुभयो ।
सुरुमा खानाको ‘टेस्ट’ र अचारको ‘सही टेस्ट’ दिनका लागि ६ महिना लाग्यो । काम भने सफल हुँदै गयो । अचार घरबाट केही राम्रो गर्न सकिने जस्तो लागपछि बैँकको जागिर छोड्नुभयो । त्यसपछि उहाँको सबै समय अचार घरमा बित्न थाल्यो ।
खानाका परिकार त जहाँ पनि पाइन्छन् । तर अचार घर भने अचारका विभिन्न परिकारकै लागि प्रख्यात छ ।
अचार घरमा नेपाली खानाको परिकारसँगै अकबरे, लप्सी, सुकाएको मूला, खल्पी, कागती, मसलालगायतका १२ भन्दा धेरैथरीका अचारको स्वाद चाख्न पाइन्छ । ‘गाउँघरमा पहिले निकै प्रचलनमा रहेको र अहिले हराउन लागेको अचारको संरक्षण र अचारका पारखीहरुलाई सन्तुष्टि दिनका लागि अचार घर सञ्चालन गरिएको हो’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अचार पारखीको आकर्षण पनि बढिरहेको छ ।’
पहिला सासूले उत्पादन गरेको अचार बेच्नका लागि गाह्रो हुँदै गएकोमा अहिले सजिलो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘तीन वर्षअघि मात्रै सञ्चालन गरिएको अचार घर यति प्रख्यात होला भनेर अनुमान नै गरेको थिइनँ’ उहाँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली खानाको परिकार, नेपाली स्वादको अचारसँगै अचार घरमा सारङ्गी र मादल पनि घन्किन्छ ।
अचार घरबाट दैनिक ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ ।
ग्राहकको आकर्षण बढेपछि अर्को पनि शाखा खोल्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘उपत्यका भित्र या बाहिर जता भए पनि नयाँ अचार घरको शाखा खोल्ने तयारी छ’। उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय युवाहरु स्वदेशमा काम पाइएन भन्दै विदेशीने गरेकाले अरु ठाउँमा पनि शाखा खोलेर केही हदसम्म भए पनि बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न पहल गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बनाउन गाह्रो, बेच्न सजिलो
अचारका पारखी बढेपछि अचार बेच्न गाह्रो छैन । पाण्डको रेष्टुरेन्ट पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ । तर अचार बनाउन भने गाह्रो छ ।
बेमौसममा अचारको लागि आवश्यक खाद्यवस्तु जोहो गर्नु निकै गाह्रो हुने हजुरी विष्टले बताउनुभयो । सबै मसलाहरु धेरै दिनसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन, जसका लागि उमालेर सुकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । सबै थरीका अचार बाह्रै महिना बनाउन कठिन हुने उहाँको अनुभव छ ।
हजुरीले विशेषगरी लप्सी, अमला, कागती र मूलाको अचार बनाउनुहुन्छ । अचारको लागि आवश्यक सामग्री विभिन्न जिल्लाबाट काठमाण्डौ ल्याउने गरिन्छ । लप्सीलगायतका कतिपय अचार एक वर्षका लागि बनाएर राख्नुपर्छ । बढी मात्रामा ग्राहकले रुचाउने लप्सीको अचार जाडो महिनामा नै सबै महिनालाई पुग्ने गरी बनाएर राख्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘लप्सीलाई उमालेर स्टोर गरेर राख्ने गरेका छौँ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सिजनमा २ हजारदेखि २ हजार ५ सय किलोसम्म लप्सी किनेर अचार बनाउनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने गरिन्छ ।’
भण्डारणमा सावधानी नअपनाइए बिग्रिनेदेखि कुहिएर नोक्सानसमेत हुने जोखिम रहन्छ । तर अहिलेसम्म नोक्सानी व्यहोर्नुनपरेको हजुरीले बताउनुभयो । उहाँले बनाएको अचार विदेशमासमेत निर्यात हुन्छ ।
जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
'फोर्ब्स' को सर्वाधिक कमाइ गर्ने अभिनेताको सूचीमा अक्षय कुमार ...
७७ वटै जिल्लाबाट सवारी पास वितरण बन्द
बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
भारत : कर्नाटकका उद्योगपतिले मृतक पत्नीको प्रतिमा बनाए, सँगै ...
बुटवलमा भदाै ५ सम्म लकडाउन
आइसाेलेशनमा शय्या अभाव, सङ्क्रमितलाई घरमा राखियाे
व्यवसायीहरुले आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गर्नू : मन्त्रालय
काेराेना भाइरस : नेपालमा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै १० जनाकाे...
राष्ट्र बैंकमा पनि कोरोना, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग सिल
सडकमा मृत भेटिएका पुरुषमा काेराेना पुष्टि
सप्तरीमा जीप र माेटरसाइकल ठाेक्किँदा २ जनाकाे ज्यान गयाे, २ ...
'नयाँ नक्सा त आयाे तर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर...
काठमाण्डाैमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका धादिङका पुरुषमा काेर...
हवाई कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा, उडान नखुलाए आन्दोलनमा जाने सञ्...
रुसले काेराेनाविरुद्धकाे खाेप बनायाे : पुटिन
भुटानमा पहिलो पटक लकडाउन
चीनले सुरु गर्‍याे कोरोनाविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण
‘देशमै उद्यम चाहनेहरुले ऋण पाइएन भन्नु पर्दैन, एक पटक बैंकसम्म पुग्नुहोस्’
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका कमजोर
‘एक वर्षभित्रै कागज रहित भन्सार र झन्झट रहित व्यापार हुनेछ’
साउन २६, २०७७ सोमबार
विषम परिस्थितिमा श्रमिकको समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ
साउन २५, २०७७ आइतबार
स्मृतिपत्र – घोप्ट्याएर पसिना, गर्दैछु पैसाको खेती अल्लाहको देशमा